ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ သံလျင် ရှိ ရောင်းရန် Land Sale in Thilawa (ID-310), ခြံ ၊ မြေကွက် | ShweProperty.com
ရောင်းရန် - ခြံ ၊ မြေကွက် - Land Sale in Thilawa (ID-310)
1.8378 Acres land for sale in Thilawa , Thanlyin Township.
Asking price for 1 acre is 3700 Lakhs (Nego).
Land Sale in Thilawa (ID-310)
သန်လျင်မြို့နယ်၊ သီလ၀ါစက်မှုဇုန်ရှိ ရောင်းရန် မြေဖြစ်ပါသည်။
မြေအကျယ် - ၁.၈၃၇၈ ဧကရှိပါသည်။
မြေ ၁ဧက အရောင်းဈေးနှုန်း - သိန်း ၃၇၀၀ (ညှိနှိုင်း)
သီလ၀ါရှိ ရောင်းရန် မြေ (ID-310)
Property ID: S-1186064
အိမ်ခြံမြေ အမည် : Land Sale in Thilawa (ID-310)
Shweproperty ID: S-1186064